त्यसो त भारतबाट सिक्नु नपर्ने र नहुने प्राय: सबै कुरा हामीले सिकीसकेका छौं र सिक्नु पर्ने कुरामा भने हाम्रो ध्यान कहिल्यै गएको छैन भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला । मूल कुरा त भारत माने बिहार वा दिल्ली मान्ने सोच र खराब कुराप्रतिको भिन्न आकर्षणले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ।
यो हप्तामा म बसेको प्रदेशमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो । चुनाव भन्ने बित्तीकै हाम्रो मानसपटलमा प्राय: घर-चोक भित्ता र नगरका पुरै पर्खाललाई मोबिल देखी लिएर थरि थरिका रंग र पर्चा पोष्टरले भर्ने राजनैतिक मेलाको झलक आउँछ । तर यहाँका चोक, गल्ली र भित्तामा कतै कुनै दल वा उमेदवारको ‘नमस्कार’ गर्दै भोट माग्दै गरेको एउटा पोष्टर समेत देखिएन । राज्यले निषेध गरेका कारण हातले बाँडने प्रचार सामाग्री बाहेक कागज र रंगले शहर फोहर पार्ने काम कतै भएन ।
हामी कहाँ पनि कमसेकम चुनावका नारा र भद्दा पर्चा पोष्टर सार्बजनिक भित्ता वा नगरवासीको घरमा टाँस्न नपाईने नीयम बनाएर लागु गरेमा हामीले पनि केही राहत पक्कै पाउँथ्यौं होला ।
अर्को कुरा, चुनावको एक दिन अघि देखि १ दिन पछी सम्म यहाँ मदिरा र मदिराजन्य पदार्थ बेच-बिखन गर्न पनि प्रतिबन्ध गरिदोँरहेछ । हुन त मदिराले नै झगडा-लफडा वा मुठभेड गराउँछ भन्ने कुनै ठोकुवा गर्न सकिन्न तर यसकै कारणले हुने विवाद र र विवादसंगै निम्तने झगडा र तोडफोड भने न्यून हुने कुरा शान्तपूर्ण चुनाव सम्पन्न भएपछि मान्न कर लाग्यो । हुन त यहाँ पनि मदिरा निषेध हुने १ दिन अगाडि मदिरा पसलको भिड हेर्न लायक हुन्छ तर पनि कमसेकम यत्ति मात्रै गर्न सके पनि हामीकहाँ पनि व्यर्थका विवाद र जोशका झगडा घट्दैनथे कि !यो पोस्टमा यसै सम्बन्धि केहि तस्बिरहरु ।
(यो देउसी माग्न होईन भोट माग्न आएका हुन)
(यो पनि बिहेको जन्ति होईन, भोट माग्नेको हुल हो )
(चुनाब प्रसार यसरी नै भयो तर शहरका भित्ताहरु भने सफा नै रहे)
(चुनाब अवधिभर झगडाको बिउ बेच्ने पसल यसरी नै बन्द रह्यो)
केही समय पहिले सहयात्री ब्लगर आकारजीको बल्गमा एउटा पोष्ट पढेकी थिएँ । कुरा सानो जस्तो देखिए पनि नेपालका प्रिपेड मोबाईलो रिचार्च कार्ड किन्दा उपभओक्ताहरु ठगिने बारेमा थियो त्यो पोष्ट ।
केही प्रतिस्पर्धाको कमी र केही भने उपभोक्ताकै कमजोरीका कारण हामीकहाँ सानो- ठुलो जे रुपमा भएपनि उपभोक्ता ठगीने क्रम जारी छ ।
हिजों, कार्यालयबाट फर्कदैं गर्दा बाटोमा एउटा विज्ञापनमा आँखा पुग्यो र यसैलाई आजको पोष्टमा उतारेको छु ।
म नेपालमै छँदा भारतीय टेलिभीजनमा पहिलोपल्ट ६ महिनासम्म “ईनकमिङ फ्री” भएका मोबाईलका विज्ञापन देखिन्थे । पछि यहाँ आउँदा, २ बर्षे फ्री, ३ बर्षे फ्री हुँदै पाँच बर्षे र अनि “लाईफ टाईम फ्रि” सिम बिक्न थाले ।
सुरुमा करिब १५०० मा लाईफ टाईम फ्रि पाईन्थ्यो भने पछि त्यो रकम ९९९ मा झर्‍यो। त्यसपछि धेरै सम्म ४९९ मा पाईन्थ्यो ।
हालै केही टेलिकम कम्पनीले फोनको कल रेट १ सेकेण्डको १ पैसामा गणना गर्ने गरी मिनेटको हिसाबमा हैन सेकेण्डको हिसाबमा पैसा तिर्ने गरी नयाँ अफर ल्याए पछि यहाँ कम्पनीहरु बीच सिम बिकाउन झन नयाँ नयाँ तरिकाको जोड चल्दै छ ।
दसैं-तिहार ताका यहाँ एउटा सिम किन्दा अर्को फ्री र ३०० मा, २०० मा गर्दै १०० रुपैयामा समेत सिम बिके । त्यसपछि २५ रुपैयामा सिम र सो सिममा १० रुपैयाको ‘टक-टाईम” भइको लाईफ टाईम ईनकमिङ फ्रि पनि बजारमा देखीएको हो ।
तर हाल भने यस्तो विज्ञापन छ:
हेरौं अब यो भन्दा कममा जाने वा अर्कै “अफर” निकाल्ने कुनै अर्को कम्पनी पनि निक्लन्छ कि ?
(१ रुपैयाँमा लाईफ टाईम फ्रि सिम, त्यसमा रु १० को फ्रि टक टाईम !!!)
(यो भन्दा पनि घट्ने ठाँउ छ होला त ?)